काठमाडौंः केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन थालेको एउटा पोर्न भिडियोबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा विवादास्पद बहस सुरु भएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेकाहरूले उक्त भिडियो नेपाली युवतीको भएको भन्दै सनसनी मच्चाएका हुन् ।
एक अस्ट्रेलियन युवकसँग शारीरीक सम्बन्ध गरिएको युवतीको ४ मिनेट लामो भिडियो विभिन्न ग्रुप हुँदै ग्रुप र सिंगल च्याट बक्समा भाइरल हुन थालेको छ ।
यस विषयमा प्रहरीले आफ्नो ढंगबाट अनुसन्धान जारी गरेको बताइएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् - यौनधन्दामा संलग्न अभिनेत्री अमृता पाँचतारे होटलबाट पक्राउ
बलिउडमा बेला बेलामा यौनकै विषयलाई लिएर चर्चा हुने गरेको छ । केही समयअघि पनि अभिनेत्री यौनधन्दामा संलग्न भएको खुलासा भएको थियो ।
समाचार अनुसार बलिउड अभिनेत्री अमृता धनोआलाई मुम्बइ पुलिसले गोरेगांवको उक होटलबाट पक्राउ गरेको छ । अमृतालाई पुलिसले छापा मार्ने क्रममा मुम्बइको फाइभ स्टार होटलबाट पक्राउ गरिएको हो ।
उनीसँगै स्ट्रगलिङ अभिनेत्री ऋचा सिंहलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । उनीहरुलाई अवैध यौनधन्दाको अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो ।पुलिसलाई आफ्नो स्रोतबाट यहाँ अवैध यौनधन्दा चलिरहेको खबर आएपछि छापा मारेको थियो । अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै : पाेखराकाे फेवातालमा विदेशी महिलाको अश्लिल फोटोसुट !
यस्तै : अस्ट्रेलियाको आगो निभाउन नग्न तस्बीरबाट वार्डले कमाइन् १ अर्ब !
यस्तै : महिला सांसदकाे नग्न तस्विर सार्वजनिक भएपछि दिइन् राजीनामा
केटी हाउस एथिक्स कमेटीको पनि अनुुसन्धानमा पनि परेकी छिन् । नग्न तस्बिर सार्वजनिक भएपछि आफूलाई पदमा रहँदा अझै के के कुरा सार्वजनिक हुने हुन् भन्ने डर लागेको बताएकी छिन् ।
केटीले आइतबार संसदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरिन् । नोभेम्बर सन् २०१८ मा उनी छानिएकी थिइन् । केटीले ट्वीटरमा पनि आफ्नो राजीनामा पत्र सेयर गरेकी छिन् ।
केटीले भनिन्, ‘मेरो गोपनियतामा दखल दिएर नीजि पलको तस्बिरलाई मविरुद्ध प्रयोग गरियो । यो गैरकानूनी हो ।
यस्तै, एउटा ठूलो मिडिया कम्पनीको वेबसाइटमा इन्टिमेट फोटो प्रकाशित हुँदा पनि उनीहरुले कानूनी कारवाहीको धम्की दिएका छन् ।
यस्तै : सरकारी वेबसाइटमा सनी लियोनका नग्न तस्बिर भेटिएपछि…
तेस्तै : विश्वमा सबैभन्दा पहिले नग्न बस्ती कुन देशमा बस्यो होला ?